Download handyPrint Bilaashka ah ee Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Netputing handyPrint u Mac
Netputing handyPrint u Mac
In la jaan qaada OS X 10.7 Libaaxa iyo meelo ka baxsan, HandyPrint waa activator ah oo ay maamushaa in ay wadaagaan network iyo deegaanka madbacadaha ku lifaaqan alaabooyinka kale ee socda macruufka 4.2 ama cusub. Sidoo kale loo yaqaan AirPrint, HandyPrint oo amarka ka qaata oo dhan xayeysiis printer network degaanka iyo iyaga dhaqaajiso via handyPrint. Haddii la wadaago oo la arki karo oo ay aad Mac, waxa la shaacin doonaa.
Printer Air iyo hawada-qaybsiga activator
Iyadoo ujeedadu ay u taageeraan qalabka daabacaadda ka weyn, handyPrint waa xal wanaagsan yaa ugu Sugan kuwa madbacadaha ka weyn, ama taageero Airprint lagu waayay casriyayn ah. Waxay muujin karaan madbacadaha deegaanka laga helay shabakadda una Gargaartaan oo aan taageero ka Airprint hooyo. Si la printer shebeked wadaago shaqeeyaan, printer u baahan tahay in la helo Mac OS ama macruufka qalab ah oo ku saabsan oo la arki karo waa, oo sida xarun u ah awoodda Airprint. Marka la demiyo, awoodaha Airprint in printer in la tageen doonaa.
Easy in ay isticmaalaan la madbacadaha ka weyn
HandyPrint waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Ku darista qaar ka weyn madbacadaha Canon iyo HP in qalab xarun iMac imtixaanka, aan ogaanno in ay aqbalaan handyPrint in ay helaan wax kasta oo ka macruufka ama qalab la wadaago MacOS on iMac. Inta lagu guda jiro habka isticmaalka, handyPrint waa hufan oo ka dhigaysa dadka isticmaala inta badan ma walwal ku saabsan taageerada Airprint leeyihiin oo dhan. handyPrint waa codsi ah run ahaantii waxtar u leh dadka waayeelka ah madbacadaha.
Ma sii HandyPrint ku xiran tahay taageerada Apple gudaha OS ah. Tani waxay sii daayo weyn ayaa sidoo kale waxaa macquul ah in dadka isticmaala ee aan haysan si ay u helaan nimo "Administrator", taas oo ah wax wanaagsan oo ammaanka. Si kastaba ha ahaatee, HandyPrint kaliya waddaa ka dib markii qortey user kaakicin ah. Iyo handyPrint ma laga heli karaa App Store ah, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah goobaha kale, sida netputing.com, in ay bixiyaan downloads.
Sida loo Print WhatsApp Messages on iPhone
Sida loo Print Xiriirada ka iPhone ama Lugood ee kaabta
Nero u Mac? Download Alternative ee Best in Nero u Mac
Marcel Bresink Software-Systeme: TinkerTool u Mac
Sida loo Beddelaan FLAC in regelingen on Mac OS X (El Capitan ka mid ah)
Sida loo Connect fiidiyo ugu Mac
Top 5 Solutions si ay u gudbiyaan Music ka Mac in macruufka 7
3 hab oo loo sameyn Data Rescue Mac Si fudud